ကိုရိုနာက နေရောင်ခြည်ကို ကြောက်သတဲ့လား....................... - Page 8 of 32 - Hello Sayarwon
နေပူရင် ပိုးသေတယ်ဆိုတော့ လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာပတ်ပြီး ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကိုရိုနာကရော နေရောင်ခြည်နဲ့ တွေ့ရင် သေသလား…….. ဒီအကြောင်းကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
နေရောင်ခြည်က ရောဂါပိုးတွေကို သေစေနိုင်တယ်
ဒီစကားက ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင်းနှီးလာတဲ့ စကားဖြစ်မှာပါ။ နေရောင်ထဲထွက်နေလိုက် ပိုးသေတယ်။ ကလေးလေးတွေကို မနက်ခင်း နေရောင်ခြည် ပြပေးရတယ် ပိုးတွေ သေအောင်လို့ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒီအယူအဆက မှားလားဆိုတော့ မမှားပါဘူး။ ပုံမှန်ဖြစ်နေကျ ရာသီတုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ်တွေဆိုရင် ဆောင်းတွင်း နဲ့ မိုးတွင်းလိုမျိုး အေးတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေတွေ စိုစွတ်တဲ့ရာသီဥတု အခြေအနေတွေမှာ ကူးစက်မှုနှုန်း ပိုမြန်တတ်ကြပါတယ်။ အေးမြစိုစွတ်တဲ့ ရာသီဥတုအနေအထားက ဗိုင်းရပ်စ်ကို ရှင်သန်ချိန်တိုးစေတာကြောင့်ပါ။ ရာသီဥတုလေးက နေသာနေမယ် ပူနွေးနေမယ်ဆိုရင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းက နည်းတယ်လေ။
ရောဂါပိုးတွေက ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေကို ခံနိုင်စွမ်းနည်းကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရော အပူဒဏ် ကိုခံနိုင်လားဆိုတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ သဘောပါပဲ။ လေ့လာမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်လို့ အတိအကျ ပြောဖို့ကတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီလိုပြောရတာက ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (UAE)၊ အီရန်၊ အီရတ်လိုနိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်ပွားသလို သမပိုင်းရာသီဥတု ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ထိုင်းတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဖြစ်သလို အေးတဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ တရုတ်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်တို့မှာလည်း ဖြစ်ပွားနေတာပါ။ သေဆုံးမှု အပြင်းထန်ဆုံးကတော့ အီတလီနဲ့ စပိန်နိုင်ငံတွေပါ။ အမေရိကန်လည်း သေဆုံးမှုမြင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံပေါ့။
နေရောင်ခြည် အကြောင်း တစေ့တစောင်း
မနက်ခင်းနေခြည် နွေးနွေးလေးက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် D ကို ဖြည့်ပေးပါတယ်။ အရိုးနဲ့ ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပြီး စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေဖို့အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ဗီတာမင် တစ်မျိုးပေါ့။
နေရောင်ခြည်လိုဆိုလိုက်ရင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဆိုတာကိုလည်း မေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေထဲမှာ
UVC ဆိုပြီး ကွာခြားနေပါတယ်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အမျိုးအစားတွေထဲကတစ်ခုပါ။ UVA က ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကို အများဆုံးရောက်ရှိနိုင်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တစ်မျိုးပါ။ အရေပြားအတွင်းပိုင်းထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်တာ၊ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမငိးတာတွေ၊ အသားအရေထိခိုက်မှုတွေရဲ့ အဓိက လက်သည်ပေါ့။
ဒီ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အမျိုးအစားကတော့ အရေပြားထဲကDNA ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ နေလောင်တာကို ဖြစ်စေပြီး အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မျိုးစလုံးက အသားအရေကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ကြောင့် အသားအရေ မထိခိုက်စေဖို့ဆိုရင် နေလောင်ကာခရင်မ်လိမ်းပြီး ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
တတိယမြောက် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အမျိုးအစားပါ။ ပြင်းအားမြင့်သလို လှိုင်းတို အမျိုးအစားပေါ့ ဗိုင်းရပ်စတွေ၊ ဘက်တီးရီးယားတွေတင်မဟုတ်ဘဲ သက်ရှိတွေရဲ့ မျိုးဗီဇတွေကိုပါ ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို အိုဇုန်းလွှာက စစ်ထုတ်ပေးထားတာကြောင့် ထိတွေ့မိတာမျိုး မရှိပါဘူး။
ဒီရောင်ခြည်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွေ နဲ့ ဆေးရုံလို နေရာမျိုးတွေမှာ ပိုးသတ်ဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီစွမ်းအားပြင်းတဲ့ UVC က ၁၅ မိနစ်အတွင်း ကိုရိုနာအပါအဝင် ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို သုတ်သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်ထိတွေ့နေကျ UVA နဲ့ UVB ကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို သုတ်သင်ပေးနိုင်တယ်လို့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် နေရောင်ခြည်ထဲမှာပါတဲ့ UVB ကတော့ ဗီတာမင် D ရယူမှုကိုကောင်းစေပြီး ကိုယ်ခံအား တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုက်သင့်တဲ့ နေရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုလုပ်ပြီး ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်လို့တော့ရပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းတာကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။
နေရောင်ခြည်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်သလား ဆိုတာကတော့ အခုချိန်ထိ စမ်းသပ်နေဆဲ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ အခုချိန်ထိ စမ်းသပ်မှုကနေ သိရတဲ့ ရလဒ်ကတော့ ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတု အခြေအနေက ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ကူးစက်နိုင်စွမ်းကို အနည်းငယ် ဟန့်တားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါ။
ကာကွယ်ပါ….. ကိုယ်တိုင်ကိုရော …မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ………..
ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက် ပိုမိုထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း COVID_19 ကို အထိရောက်ဆု့းတိုက်ထုတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းက ကိုယ်တိုင်ကစပြီး ကာကွယ်တာပါ။ ဒါကြောင့်နေ့စဉ်
UV radiation from the sun increases ‘byafactor of 10’ by summer and could be key in slowing COVID-19 https://www.accuweather.com/en/health-wellness/uv-radiation-from-the-sun-increases-by-a-factor-of-10-by-summer-and-could-be-key-in-slowing-covid-19/703393 Accessed Date 27 April 2020
Can you kill coronavirus with UV light? https://www.bbc.com/future/article/20200327-can-you-kill-coronavirus-with-uv-light Accessed Date 27 April 2020
COVID-19: Does sunlight rapidly destroy the coronavirus? https://gulfnews.com/world/americas/covid-19-does-sunlight-rapidly-destroy-the-coronavirus-1.1587801920020 Accessed Date 27 April 2020